Na sɛ mutie Awurade, mo Nyankopɔn no, na mudi mmara a mede rema mo nnɛ yi so a, Awurade, mo Nyankopɔn no, bɛpagyaw mo wɔ aman a wɔwɔ wiase nyinaa no so. Sɛ mutie Awurade, mo Nyankopɔn no, a mubenya saa nhyira yi nyinaa:
Wobehyira mo wɔ mo nkurow ne mo man mu.
Wobehyira mo yafunu mu aba, ne mo nsase so nnɔbae, ne mo nyɛmmoa, nantwimma ne nguamma.
Wɔde nnuaba nkɛntɛn amaama, ne mmɔre korow a brodo no ahyɛ ma behyira mo.
Wobehyira mo fieba mu ne mo adifi mu.